DAAWO: Itoobiya oo u hanjabtay Xildhibaano ka tirsan BFS Kadib Arrinta Qalbi-dhagax. – Xeernews24
DAAWO: Itoobiya oo u hanjabtay Xildhibaano ka tirsan BFS Kadib Arrinta Qalbi-dhagax.
6. September 2017 /in VIDEO/AUDIO /von admin
Xildhibaan sakariye oo kamid ah Barlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay Hanjabaado u Sheegay in Xubno ka mid ah Barlamaanka Soomaaliya oo isagu ku jiro ay Itoobiya usoo Hanjabtay, kuwaasoo wada Mooshin la xidhiidhaa Arrinta Qalbi Dhagax.
Dhinaca kale waxaa uu Sheegay Xildhibaan sakariye in Dawlada Soomaaliya wali ay u furan tahay fursad ay ku Soo celiso Qalbi Dhagax wuxuuna yidhi “Hada Ka hor ayaa Sidan oo kale Xubno Laba ah ONLF ah waxaa Dalka kenya ka dhex Ka xeestay Itoobiya, Kenyana wey kadaba tagtay Shuruucda Caalamiga ah ayay la Cugsatay weyna soo ceshatay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/09/zakariya.jpg 206 245 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-09-06 16:06:362017-09-06 16:06:36DAAWO: Itoobiya oo u hanjabtay Xildhibaano ka tirsan BFS Kadib Arrinta Qalbi-dhagax.
Faalo:Soomaaliya iyo Itoobiya, Ma Cadaw Mise Saxiibo? Wax ka ogow Halkay martay Deeqo Raashin ahaa Jabuutina ku taakulaysay dadka...